Very Busy? Actually Not That Busy! - IT-KOKO
ကျွန်တော်ဒီရက်ပိုင်းတွေမှာ တော်တော် အလုပ်များနေတယ်။ ဘာတွေများနေလဲ ဆိုတာကို ပြန်ကြည့်ရရင်…
ကျွန်တော်တို့ ကျောင်းရဲ့ Cultural Show မှာ ဝင်ပါထားတယ်။
ကျွန်တော်တို့ကျောင်းမှာ Cultural Show တစ်ခါမှမလုပ်နိုင်သေးပါဘူး။ ကျောင်းသားတွေလဲ အများကြီ:ရှိရဲ့သားနဲ့ မလုပ်နိုင်ရမလားဆို ပြီး သူငယ်ချင်းတွေ စုပေါင်းပြီး လုပ်လိုက်တာ အခုဆို လက်မှတ် အားလုံးနီးပါး ကုန်သွားပါပြီ။ လာမယ့် Sunday ဆိုရင် ပွဲစပါပြီ။ ဟိုးအရင်တုန်းတွေကတော့ International Student Festival ဆိုပြီးတော့ လူအများနဲ့တော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အခုကတော့ မြန်မာတွေပဲ လုပ်တဲ့ပွဲဆိုတော့ အစစ အရာရာ လုပ်ရတာ ခက်ခဲပါတယ်။ Performers တွေက Practice မလာ၊ လုပ်ရမှာတွေက မပြီးသေး။ ပြောထားပြီးသား အရာတွေက ဖြစ်မလာ။ အားလုံး တော်တော်လေး ပင်ပန်းတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ Main Organizer ကြီး ကိုတေဇာ ပေါ့။ တော်တော်လေး ကိုကြိုးစားပြီးလုပ်တယ်။ စိတ်ရှည်တယ်။ သည်းခံတယ်။ လမ်းကြောင်းမှန်တယ်ပေါ့။ (ဟဲဟဲ)
ကျွန်တော်က အများကြီးတော့ တာဝန်မယူထားပါဘူး။ Media, Marketing, Design အပိုင်းတွေကို အဓိကထားပြီး လုပ်တယ်။ အစတုန်းကတော့ အဖော် ၂ယောက်ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ တစ်ကိုယ်တည်း ဖြစ်သွားပါတယ်။ အားလုံး တူတူလုပ်ကြတော့ ပြီးတာပေါ့။ Ideas တွေ တော်တော်ရလိုက်ပါတယ်။ အခုတော့ အားလုံးပြီးသွားပါပြီ။ လက်မှတ် လည်းပြီးပြီ၊ Poster လည်းပြီးပြီ၊ Backdrop banner လည်း ပြီးပြီ၊ Name tags လည်းပြီးပြီ၊ နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ သီချင်းတွေ ဖွင့်ပေးရမယ်။ Audio Control လုပ်ရမယ်။ Music တွေကတော့ အားလုံး ဖြတ်ပြီးပြီ။ Ready လို့ပြောလို့ရတယ်။ ပွဲနေ့မှာ ဘာတွေ ဖြစ်လာအုံးမလဲဆိုတာတော့ မပြောတတ်သေးဘူး။ အခု လောလောဆယ် ပြဿနာကတော့ မြန်မာ့ဆိုင်းဝိုင်း အငြိမ့်အတွက်။ Computer နဲ့တီးမယ်လို့ ပြောနေတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မလုပ်ဖူးသေးတော့ သင်ရအုံးမှာပေါ့။ အားလုံ အိုကေပါစေလို့ ဆုတောင်းရမှာပဲ။ ကျွန်တော်က အစတုန်း Photo|video အပိုင်းကို ဦးစားပေးပြီးလုပ်ထားတာ၊ အခုတော့ ဒီဇိုင်းတွေပါလုပ်နေရတယ်။ ကျွန်တော်က ဒီဇိုင်းအပိုင်းမှာ တော်တော် weak တယ်။ အခုတော့ Photoshop တော်တော် လုပ်တတ်သွားပြီ။ ဒီပွဲကြီးပြီးသွားတော့မှ ပဲ စိတ်တုန်းတုန်းချတော့မယ်။ အခုတော့ ကျန်တာတွေ ခဏမေ့ထား လိုက်အုံးမယ်။
ကျွန်တော် Assignments တွေလုပ်နေတယ်။
ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာ ဘာသာ၄ခု ယူထားပါတယ်။ နှစ်ခုက assignment based နောက်နှစ်ခုကတော့ ရိုးရိုး စာမေးပွဲ ဖြေရတယ်။ Web Application Development (php) နဲ့ Data Structures and Algorithms(java) ကတော့ coding များတော့ Assignment လုပ်ခိုင်းတယ်။ php Assignment ကတော့ လွယ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။ ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ User Log in, Log out, Add Event, Search Event, View Events, Show Last5Events in Home Page, etc ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ ကောင်းအောင် ကြိုးစားပြီး လုပ်ထားတယ်။ Jquery သုံးတယ်။ HTML5form tags တွေသုံးတယ်။ CSS3 နဲ့ အလှဆင်ထားတယ်။ Media queries တွေပါထည့်ထားလိုက်တယ်။ Jquery ကတော့ scroll page လုပ်တာပါ။ Assignments နှစ်ခုလုံးက ဆက်တိုက်ဆိုတော့ တော်တော် အလုပ်ရှုပ်သွားတယ်။
php ပြီးသွားတော့ java၊ အဲ့မှာ စတွေ့တော့တာပါပဲ။ reversi game လုပ်ခိုင်းတာပါ။ အွန်လိုင်းမှာတော့ ဂိမ်းတွေအများကြီးပဲ။ ယူလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြည့်ရတာ ရှုပ်လို့ ဘားမှမကြည့်ပဲ ကိုယ့်ဟာကို ရေးနေတာ တော်တော်လေး ကွိုင်သွားတယ်။ အချိန်မပေးနိုင်တာ ကြောင့်လဲပါတယ်။ ကောင်းကောင်းမပြီးဘူး။ အမှတ်ကတော့ အောင်ရုံလောက်ပဲ ရတော့မယ်ထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြန်တွေးကြည့်တော့ ကျွန်တော် coding ကို အရမ်းမကြိုက်ဘူး။ ရေးရတာကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းမရေးတတ်ဘူး။ စဉ်းစားလို့မရဘူး။ ဘယ်ကနေစပြီး ဘယ်လိုရေးရမလဲ ဆိုတာ မသိတာ တော်တော်ဆိုးတယ်။ weak တယ်လို့ပဲပြောရမလား မသိဘူး။ အခုတော့ အားလုံးပြီးသွားပြီ။ နောက် နှစ်ပတ်လောက်ဆိုရင်တော့ Assignment2ထွက်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အဲ့ခါကြရင်တော့ အလုပ်ပြန်ရှုပ်တော့မှာပေါ့။
Assignment က ၂ ဘာသာဆိုပေမယ့် စာမေးပွဲကလည်း ရှိသေးတယ်။ စာမေးပွဲ သုံးခုမှာ ဒုတိယ တစ်ခုကိုပဲ assignment က cover လုပ်တယ်။ ကျန် နှစ်ခုကတော့ ဘာသာအားလုံး စာမေးပွဲရှိတယ်။ ဖြေရတာပေါ့။ စာမေးပွဲကတော့ မြန်ပါတယ်။ တိုတယ်။ ၄၅ မိနစ်ပဲ ဖြေရတာကိုး။ စာလည်း များများ စားစား ကြည့်စရာ မလိုသေးဘူးလေ။ ၁ − ၅ ခန်းလောက်ပဲကြည့်ရတာဆိုတော့ နည်းတယ်လို့ ပြောရလို့ရတယ်။ နောက်ဆုံး တစ်ဘာသာ က Cultural Show ပြီးပြီး ချင်း နောက်နေ့မှာ ဖြေရမယ်။ အခုကတည်းကတော့ စာတွေ ကြိုကြည့်ထားတယ်။
ကျောင်းတတ်ရင်းနဲ့ အလုပ်လုပ်တာ Singapore မှာ ထူးဆန်းမနေတော့ပါဘူး။ ဘယ်လို အသိုင်းအဝိုင်း ကလာလာ အလုပ်လုပ်လို့ ပိုက်ဆံရရင် လုပ်မှာပဲ။ တချို့က အားလို့လုပ်တယ်၊ တချို့က ပျော်လို့လုပ်တယ်၊ တချို့က အဖော်ရှိလို့လုပ်တယ်၊ တချို့က ပိုက်ဆံပို သုံးချင်လို့ လုပ်တယ်၊ ကျောင်းလခ ပေးဖို့လုပ်တယ်၊ စားဖို့မရှိလို့လုပ်တယ် စသည်ဖြင့် အမျိုးမျိုးရှိမှာ ပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ အားလုံး ကြေင့်လုပ်တယ်။ မလုပ်လို့ မရလို့ကိုး လုပ်နေရတယ်။ လုပ်ရင် ပင်ပန်းတယ်၊ ပိုက်ဆံရရင် ပျော်တယ်၊ လိုချင်တာတွေ ဝယ်တယ်။ ပေးတယ်။ စားတယ်။ အကုန်လုပ်လို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံကတော့ ပျက်တစ်လှည့်၊ ရှိတစ်လှည့် ပေါ့ဗျာ။
ကျောင်တတ်နေတာ အခုဆိုရင် အနှစ် ၂၀ ရှိတော့မယ်။ Singapore မှာ တတ်တာကိုးက ၃ နှစ်ကျော် လို့ ၄နှစ် လောက် ရှိနေပြီ။ ပြီ:ငကို မပြီးနိုင်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် အမှန်အတိုင်း ပြောရင် အခု လိုအချိန်မျိုးမှာ အလုပ် လုပ်နေချင်ပြီ။ သင်ယူလို့ မဆုံးနိုင်တဲ့ အတန်းပညာတွေကို သင်နေရတာ ရိုးလာသလို ခံစားလာရတယ်။ တခြား အလုပ်မှာ တွေကျုံရမယ့် အခက်အခဲ ​တွေ၊ သင်ယူလို့ရနိုင်မယ့် အရာတွေကို ဆက်သင်ယူချင်တယ်။ ကျောင်းဆိုလို့ ကျွန်တော်တို့ကျောင်းက တော်တော်ဆိုးတယ်လို့ ပြောလို့ရတယ်။ ကျောင်းချိန်က fix၊ လုံးဝမပြောင်းဘူး။ မနက်ကနေ ညနေအထိပဲ။ တစ်နေ့တစ်နေ့ဒါတွေပဲ လုပ်နေရလို့ တော်တော် ပျင်းတယ်။ ကျောင်းက မသွားလို့လည်း မရဘူး။ နောက်ကျလို့လည်း မရဘူး။ စောပြန်လို့လည်း မရဘူး။ နောက်ကျရင် 1 grade down, စောပြန်ရင် grade F။ မတတ်ရင် တော့ X ။ တတ်ပြီးစာကောင်းကောင်းမလုပ်ရင်လည်း D or C။ မလွယ်ပါဘူးဗျာ။ GPA ကောင်းဖို့ဆို ပိုပြီးတောင် မလွယ်သေးတယ်။ ကျွန်တော့လို ကျောင်းစောစော မသွားတတ်တဲ့ လူမျိုးတွေဆိုရင် တော့ B တွေ တန်းစီနေမှာပဲ။ ဟဲဟဲ။
ဒါကတော့ Report ပါ။ အရှည်ပြောရရင် Professional Profiling ပါ။ အနည်းဆုံး စာလုံး၂၅၀၀ လောက်ရေးရပါတယ်။ ကိုရေးချင်တဲ့ အကြောင်းအရာ ကို ခေါင်စဉ်တတ်ပေး လိုက်ပြီး ဆရာတွေကို ပြကြည့်၊ သူတို့က လက်ခံပြီဆိုရင် စရေးလို့ရပြီပေါ့။ ကျွန်တော်ကတော့ Cloud Computing ကြောင်းရေးမယ်လို့ လုပ်ထားတယ်။ Company research ကတော့ IBM လုပ်ထားတယ်။ အဲ့ဒါကလည်း စရေးသင့်နေပြီ။ နည်းနည်း နည်းနည်းရေးသွားမှ အိုကေမှာ မဟုတ်ရင် မလွယ်ဘူး။ အဲ့ဒါကိုလည်း နည်းနည်း လေ့လာလိုက်၊ နည်းနည်းပြန်ရေးလိုက်နဲ့ လုပ်နေတာ် စလုံး ၅၀၀ ကျော်လောက်ပြီးနေပါပြီ။ January မှတင်ရမှာဆိုတော့ လိုတော့ လိုပါသေးတယ်။ ဖြေးဖြေးရေးလို့ရပါသေးတယ်။
ကျွန်တော် ရေးတာလည်း တော်တော်များသွားပြီ။ ဒီနေ့ Assignment တွေ အားလုံး တင်ပြီးလို့ ဒီ ပိုစ့်ကို ရေးလိုက်နိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင် တော်တော်နဲ့ ရေးနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ကျွန်တော် အခုနောက်ပိုင်း သတင်းတွေကြားနေရတယ်။ Adobe က flash ကို mobile တွေကို support ထက်မလုပ်ပေးတော့ဘူးဆိုတာ အားမှပဲ Apple & Flash ပိုစ်ဆိုပြီး ရေးတော့မယ်။
အားလုံး ကိစ္စသေးသေး လေးတွေနဲ့တင် ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။